Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 23)
Imifanekiso yokuqala ye-Samsung Galaxy J6 icociwe
Sikubonisa imifanekiso yokuqala yesiphelo esilandelayo inkampani yaseKorea iceba ukuyisungula kwimarike: IGalaxy J6
UXiaomi sele elorhwebo lwesithathu oluthengisa kakhulu eSpain
UXiaomi sele elorhwebo lwesithathu oluthengisa kakhulu eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokukhula kwegama laseTshayina kwilizwe lethu apho sele yenye yezona zithengwa kakhulu.
Uphengululo lwe-Insta360 OLUNYE: Gcina iinkumbulo zakho ngo-360º
Siyihlolisise kakuhle kwaye sayivavanya ikhamera ye-Insta360 ENYE 360º, ikhamera eyilelwe ngokukodwa i-iPhone kunye ne-iPad ethi, ukongeza ekusebenzeni ngokuzimeleyo, singayenza isebenze ngokubulela i-Android kwinto eyongezelelweyo okanye iqhinga endikubonisa lona.
Iimpawu kunye nokubalulwa kobuchwephesha beNokia X6 kutyhilwa ngaphambi kokuba inikezelwe
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, ezona mpawu ziphambili zeNokia X6 zisandul 'ukucocwa, inkampani elandelayo yenkampani yefowuni eza kuhamba noyilo lwenotshi kunye nezinye iimpawu ezingqinayo njengophakathi. Siyakwandisa!
Sebenzisa izibonelelo ezimnandi esizifumana kwi-Lightinthebox kwiimveliso zeXiaomi
Sikubonisa ezinye zezona zinto zinika umdla esinokuzifumana ngoku kwiXiaomi kwiwebhusayithi ye-Lightinthebox
I-OnePlus 6 inokuthengwa eNetherlands ngosuku lwenkcazo yayo
I-OnePlus 6 inokuthengwa eNetherlands ngosuku lwenkcazo yayo. Fumana ngakumbi malunga nokungena kwegama kwimarike yaseNetherlands kunye nefowuni ngale nto intsha.
Ityhile ixabiso lokugqibela leNokia X6 entsha
INokia X6: Ixabiso lefowuni yokuqala yakwaNokia elityhiliweyo. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi lwebhrendi ethiwe thaca ngomso kwaye esele silazi ixabiso layo.
Fumana i-OUKITEL K7 ngexabiso elifanelekileyo ngenxa yale ntengiso
I-OUKITEL K7, i-smartphone ethembisa ukuzimela kwiintsuku ezininzi ngenxa yomthamo we-10.000 mAh, ngokutshaja ngokukhawuleza, ikhamera ezimbini kunye nescreen esine-intshi ezi-6 inokuba yeyakho nge $ 99,99.
I-Sirin Labs ityhila iinkcukacha zeFinney, iselfowuni yayo yokuqala esekwe kwiBlockchain
IFinney sisixhobo esineempawu ezifanelekileyo kwiflegi. Le ineQualcomm SoC yamva nje kwaye inamandla, kwaye, ukongeza, ihamba kunye nezinye izibonelelo ezinikezela njengenye indlela ekhuselekileyo yokugcina ii-cryptocurrensets zethu. Yazi iinkcukacha zayo kunye neempawu!
Khuphela imifanekiso yamaphephadonga yeHTC U12 +
Ukuba ufuna ukwenza ngokwakho i-smartphone yakho kunye neemifanekiso ezintsha ze-HTC U12 +, kweli nqaku sikunika ithuba lokuzikhuphela ngaphambi kokuba i-terminal ngokwayo iboniswe kwintengiso.
Sele siyazi ukuba zeziphi iifowuni uXiaomi oza kuzazisa kwintengiso yale 2018
Ukucoca amagama eemodeli eziza kupapashwa nguXiaomi kwintengiso. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zohlobo lweshayina oluneefowuni esele zivelisiwe.
Ukucoca amaxabiso kweenguqulelo ezimbini ze-OnePlus 6
Ukucoca amaxabiso aqinisekileyo e-OnePlus 6 ekusungulweni kwayo. Fumanisa ngakumbi malunga namaxabiso aza kutsalwa yifowuni yohlobo lweshishini eTshayina.
UXiaomi umangalele uCoolpad ngokophula umthetho welungelo elilodwa lomenzi wechiza
IColppad imangalela uXiaomi ngokophula umthetho welungelo elilodwa lomenzi wechiza. Fumanisa ngakumbi malunga nokugwetywa yinkampani ekusetyenzisweni gwenxa kwelungelo elilodwa lomenzi oza njengoko uXiaomi sele eza kuhamba esidlangalaleni.
Ukucaciswa kweGalaxy J4 kunye neGPS J6
Ukucaciswa kweetheminali ezilandelayo ezisungulwa yiSamsung kwintengiso, sele kuvuza, iinkcukacha esikubonisa zona kweli nqaku.
INubia V18 ikwasungulwe ngombala obomvu
I-Nubia V18 isungulwe ngombala omtsha obomvu. Fumana ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yefowuni evela kumenzi waseTshayina oza kuphehlelelwa kungekudala ngombala obomvu.
Ukucoca okokuqala kwe-LG Q7
I-LG Q7: Iifowuni zokuqala ziVuziwe. Fumanisa ngakumbi ngesixhobo esitsha kuluhlu lweQ oluza kubakho kwintengiso kungekudala.
I-Motorola patent ifowuni esongelayo ejika ibe yithebhulethi
IMotorola inelungelo elilodwa lomenzi kwifowuni enokusongwa. Fumana ngakumbi malunga nefowuni yokuqala enokusonga yefowuni ukuze ube yithebhulethi kule patent sele ibhalisiwe.
Nge-7 kaJuni iBlackberry iveza iBlakberry KEY2, isizukulwana sesibini se-KEYOne
NgoDisemba ophelileyo, emva kweenyanga ezimbalwa zokulibaziseka, iBlackBerry KEYOne yafika eSpain, e ...
IXiaomi kunye neNokia sele ziphakathi kweempawu ezintlanu ezithengisa kakhulu eYurophu
Fumana ngakumbi ngamanani entengiso eXiaomi kunye neNokia athi kunyaka nje omnye aphakathi kweyona nto ithengiswa kakhulu eYurophu, phakathi kwezintlanu eziphambili.
Iimveliso zasekhaya zeXiaomi ngoku ziyahambelana noMncedisi kaGoogle
Ukuzenzekelayo kukaXiaomi ekhaya kuyahambelana noMncedisi kaGoogle. Fumana ngakumbi malunga nesi sibhengezo esiza xa uphawu lwaseTshayina luza kuphehlelela iimveliso zalo eMelika.
UGoogle ukumilisela iPixel smartwatch koku kuwa
UGoogle usebenza kwiPixel smartwatch eya kuthi ifike ekwindla. Fumana ngakumbi malunga newatchwatch entsha uphawu olusebenzayo kuyo.
Akusenakwenzeka ukuba uhlaziye iifowuni ze-ZTE
Iifowuni ze-ZTE ngoku zinokufumana uhlaziyo. Fumana ngakumbi ngale ngxaki ichaphazela bonke abasebenzisi abanefowuni yeZTE
I-Wiko View Lite: Uluhlu olutsha lwaphakathi kunye ne-18: 9 kwesikrini
I-Wiko View Lite: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga naphakathi kwinqanaba elitsha eliphakathi lophawu lwesiFrentshi esele ikhona kwilizwe lethu.
Ikhaya leGoogle kunye neMini Mini ziya kufika eSpain kulo nyaka
Ikhaya leGoogle kunye neMini yasekhaya ziya kuphehlelelwa eSpain kulo nyaka. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwezithethi zenkampani ezikrelekrele kwilizwe lethu kulo nyaka.
IXiaomi Redmi S2 ilapha. Yazi zonke iinkcukacha kunye neempawu zayo!
Sinika iXiaomi Redmi S2, isixhobo esitsha esihamba kunye neempawu ezininzi ezinikezela njengophakathi oluphakathi oluza kuzinika indawo elungileyo kwimarike kwaye lube ngumthengisi ogqwesileyo wesine umenzi weselfowuni uninzi ithengisa emva kweSamsung, iHuawei kunye neApple.
I-Blackview BV5800 Pro: ifowuni elandelayo yenkampani engekabikho
IBlackview, umenzi ophambili weefowuni ezirhabaxa, uzakuqalisa isixhobo sayo kungekudala. Sithetha ngeBlackview BV5800 Pro, isiphelo esisezantsi esineenkcukacha ezithile kunye neempawu ezinokunyathela phakathi kuluhlu oluza kubakho kwi-intanethi kwiveki ezayo. Sinikela kuwe!
I-OnePlus isinika isaphulelo se-euro ezingama-280 ukuba sithenga i-OnePlus 6
Inkampani yaseAsia i-OnePlus isinika isaphulelo esinomdla ukuya kuthi ga kwi-280 euro ukuba sinikezela nge-OnePlus yethu endala ukuthenga imodeli entsha.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-LG G7 ThinQ eSpain
Iflegi entsha ye-LG, i-LG G7 ThinQ yinkampani yaseKorea yokubheja ukuzama, ...
I-ZTE iyekile ukuthengisa ii-mobiles kwihlabathi okwethutyana
I-ZTE iyayeka ukuthengisa iifowuni eziphathwayo ngenxa yokuvalwa kweMelika. Fumanisa ngakumbi malunga nesigqibo somenzi waseTshayina esibeka ingxaki ekusindeni kwakhe ixesha elide.
I-Lenovo ukumilisela ifowuni enegama le-ZUK ngoJuni 14
I-ZUK ibuya nefowuni entsha nge-14 kaJuni. Fumana ngakumbi malunga nokubuyela kwebrendi kwimarike ngokusesikweni ngefowuni yayo entsha eza kutyhilwa ngokusemthethweni ngoJuni.
Iiprosesa zeQualcomm's 845, 660 kunye neeprosesa ezingama-636 ngoku zilungiselelwe i-Android P
Oyena mvelisi mkhulu weprosesa, iQualcomm isandula ukubhengeza ukuba iiprosesa zayo ze-Snapdragon 845, 660 kunye ne-636 ngoku ziyahambelana ne-Android P
I-HOMTOM ibhiyozela isikhumbuzo sayo se-5th ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwi-50 yeedola ixesha elinomda!
IHomtom ibhiyozela isikhumbuzo sayo ngesitayile ngezaphulelo ezingakholelekiyo ongenakukuphosa! Izaphulelo uHomtom asinika zona ukusuka kwi-US $ 10 ukuya kwi-US $ 50 kwikhuphoni ngalinye. Oku kusebenza kwizixhobo ezininzi apho sineHomtom H770, i-S8, kunye nezinye.
I-OnePlus 6 iboniswe ngoMeyi 16 eLondon, kodwa sele igqithile eGeekbench
Inkampani ye-OnePlus iqinisekisile ngokusesikweni usuku lwenkcazo ye-OnePlus 6, isiphelo sendlela esiza kukhutshwa ngokusesikweni ngoMeyi 16 eLondon.
IHuawey Y3 (2018): Ifowuni yokuqala yeHuawei ene-Android Go. Fumana ngakumbi malunga nefowuni yokuqala yohlobo lwaseTshayina ukusebenzisa i-Android Go.
I-360 Mobiles ihambise i-360 N7 ngesitayile e-China, ilungu elitsha kwikhathalogu yalo ezimisele kwicandelo elineemfuno eziphakathi ngenxa yeempawu zalo kunye nokubalulwa kwebanga eliphakathi.
I-Sharp ihambise i-Sharp Aquos R2, isixhobo esitsha esineenkcukacha eziqhelekileyo kunye neempawu zoluhlu oluphezulu. Kwaye, enkosi kwiprosesa yayo enamandla yeQualcomm Snapdragon 845 kunye nezinye izinto, le smartphone iza kukhuphisana ngokuchasene neyona roughest yabanye abavelisi.
Ukucaciswa kunye neempawu zeBQ Aquaris X2 entsha kunye ne-Aquaris X2 Pro
Inkampani yaseSpain i-BQ sele inayo i-BQ Aquaris X2 kunye ne-Aquaris X2 Pro esele isilungele, indawo ezimbini eziphakathi eziphakathi kwenkampani eneempawu ezinomdla kunye neempawu, kunye namandla kunye nokumangalisayo. Bazi ngakumbi!
IMotorola Moto G6 ngoku iyafumaneka eSpain
IMoto G6 iyafumaneka ukuthenga eSpain ngokusemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca esele isungulwe kwilizwe lethu.
I-Huawei / Hlonipha ukwazisa i-Android Oreo Beta yeemodeli ezi-7
Inkampani yeHuawei isandula ukuvula inkqubo ye-beta ye-Android Oreo yee-terminals ezisixhenxe, ekwabandakanya iimodeli ze-Honor, uphawu lwenkampani yesibini.
I-Galaxy S9 kunye ne-S9 + yokwazisa ebomvu e-China
I-Galaxy S9 kunye ne-S9 + zifumaneka zibomvu e-China. Fumanisa ngakumbi ngombala omtsha obomvu ophela phezulu kwintengiso yase China.
I-Oukitel U19: I-iPhone X elandelayo iClone iza kuza phantse kwi-100 yeedola
I-Oukitel U19, i-terminal eya kuba yindawo ekumgangatho ophantsi ngenxa yeempawu zayo eziza kufikelela kwixabiso elikufutshane ne-100 yeedola. Njengakwi-iPhone X kunye ne-U18, inkampani iqinisekisile kuthi ukuba i-U19 inomboniso we-notch ye-5.85-intshi.
IXiaomi Mi 7 iya kuba nenzwa yeminwe phantsi kwesikrini ngokwemeko yayo
Inkampani yaseTshayina iXiaomi ayiphumli, kwaye kubonakala ngathi sele silungile iXiaomi Mi 7, iflegi elandelayo enokufika, hayi ngomfundi ongasemva weminwe njengoko kuqhelekile, kodwa ngomnye ophantsi kwescreen njengeVivo X21, iselfowuni yokuqala enolu phawu, iyayiphatha.
Fumana iLeagoo S9 nge-110 kuphela ye-euro
Kwiintsuku ezimbalwa, sinokufumana iLeagoo S9 nge- $ 129,99 kuphela, malunga nee-euro ezingama-110, isiphelo esimnandi esisinika ixabiso elifanelekileyo lemali.
Xiaomi Redmi S2: Ukucaciswa kunye namaxabiso avuza kwiAliexpress
Xiaomi Redmi S2: Ukucaciswa, ixabiso kunye nemifanekiso evuzayo. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina olunedatha eye yavuza ngokupheleleyo kwiAliexpress.
IiVivo Y75s kunye neVivo Y83 ziqinisekisiwe kwi-TENAA
I-Vivo Y75s kunye neVivo Y83: Ukucaciswa kophakathi kwinqanaba elitsha. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezintsha zohlobo lwesiTshayina eziza kuphehlelelwa kungekudala.
Ukuqaliswa kweGalaxy J6 kuza emva kokuvuza kwiphepha lenkxaso leSamsung
Umhla wokumiselwa ngokusesikweni kwe-Samsung Galaxy J6 isondele, njengoko kucacisiwe kwiposti kwiphepha le-Samsung lenkxaso eIndiya naseUkraine
I-OnePlus 6 iya kubandakanya inzwa yokubetha kwentliziyo
I-OnePlus 6 iya kuba nenzwa yesantya sentliziyo njengeGPS S9. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kwifowuni ephezulu yesitshayina.
Khuphela i-LG G7 ThinQ yamaphephadonga
Ukuba ujonga iimifanekiso zamaphephadonga ze-LG G7 ThinQ entsha, emva koko sikubonisa amaphephadonga awodwa angama-33 avela esandleni sale flegi intsha yaseKorea.
Imbeko 7S: Uluhlu olutsha lokungena nge-18: 9 kwesikrini
Imbeko 7S: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yesiphelo esisezantsi esivela kwitshayina yaseTshayina eya kuthi ifike kwimarike ngenyanga.
IXiaomi Redmi S2 iya kuziswa ngoMeyi 10
UXiaomi uza kuzisa iXiaomi Redmi S2 ngoMeyi 10. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokubonisa wefowuni entsha ekumgangatho ophakathi ovela kuhlobo lwesiTshayina.
Ukuhanjiswa okuvuzayo kwe-LG V35 ThinQ: LG V30S ThinQ, nguwe lowo?
Iindidi ezahlukeneyo zokuba yintoni eya kuba yi-LG V35 ThinQ iyavuza. Ngokwamahemuhemu ahlukeneyo kunye nokukrokrela, njengoko bekulindelekile, esi siginali siza kuza nokuphuculwa okuninzi kwicandelo lezixhobo, apho siza kufumana iSoC enamandla ngakumbi, kunye nolunye uphuculo ukuya kuthi ga kwiikhamera kunye nebhetri.
I-Samsung Galaxy S10 inokuboniswa ngoJanuwari 2019
Amarhe amva nje avela eKorea acebisa ukuba i-Samsung ingaqhubela phambili, unyaka omnye nangaphezulu, ukuboniswa kwe-Samsung Galaxy S10 ukuya kuJanuwari wonyaka ozayo, ishiye i-MWC
Olunye ulwazi lwe-OnePlus 6 luqinisekisile
I-OnePlus 6 eqinisekisiweyo kwi-TENAA: Sele sinemigaqo yayo. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina esele sidlulile kwisiqinisekiso seTENAA.
Umncedisi kaGoogle we-Wear OS uhlaziywa ngezinto ezintsha
Umncedisi kaGoogle we-Wear OS uhlaziywa ngezinto ezintathu. Fumana ngakumbi malunga nezi zinto zintsha ziza kumncedisi kwii-smartwatches.
I-Wiko Jerry 3: I-smartphone entsha ye-Android GO ene-18: 9 screen
UWiko Jerry 3: Ukucaciswa, ukumiliselwa kunye nexabiso elisemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca esezantsi ekhoyo ngoku.
Isamsung ibe ngumenzi othengise ezona smartphones kwikota yokuqala yonyaka
Ngaphandle kwento yokuba inkampani yaseKorea i-Samsung inesabelo sentengiso e-China engaphantsi kwe-1%, eyona ntengiso inkulu…
I-HTC U12 + iya kuboniswa ngoMeyi 23
I-HTC U12 + iya kutyhilwa ngokusesikweni ngoMeyi 23. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yesiphelo esitsha sophawu lwetaiwan.
IiSoftware zeSamsung zeSamsung zinika amakhulu eedola ekuthengeni ngaphakathi nohlelo
Iiapps zeGalaxy zinika amakhulu eedola ekuthengeni ngaphakathi nohlelo. Fumanisa okungakumbi malunga noku kukhuthaza kwivenkile yeefowuni ye-Samsung
Isamsung iveza ngokusemthethweni iGalaxy A6 kunye neGalaxy A6 +, iinkcukacha kunye neempawu
Inkampani yaseKorea i-Samsung iazise ngokusesikweni i-Galaxy A6 kunye neGalaxy A6 Plus kwiwebhusayithi yayo.
Ukuthengiswa kweGPS S9 eMzantsi Korea kuyadanisa
Ukuthengiswa kweGPS S9 kusilela kulindelo eMzantsi Korea. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa okuphantsi kwefowuni kwilizwe lakho, okube kukudana.
I-Samsung Galaxy Tab S4 imalunga nokufika kwintengiso
I-Samsung Galaxy Tab S4 iya kufika kwimarike kungekudala. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwethebhulethi entsha ye-Samsung kwintengiso, engafanele ukuthatha ixesha elide.
Ezona pilisi zintle onokuthi uzinike oomama ngosuku
Usuku lukaMama lusondela, lolona lukhethekileyo enyakeni, kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokubhiyozela ecaleni kwelo bhinqa lasinika ubomi ngokumnika isipho? Sikuzisa umphezulu wamacwecwe ama-5 awona mgangatho uphezulu kunye nomgangatho wexabiso ukuze ufumane enye yazo.
UXiaomi sele eyorhwebo lesine ethengiswa kakhulu kwihlabathi liphela
IXiaomi ikwindawo yesine njengeyona nto ithengiswa kakhulu emhlabeni. Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yohlobo lwaseTshayina kwikota yokuqala yalo nyaka.
Iifowuni zexabiso eliphantsi onokuthi uzinike uSuku loMama
Ukuba awazi ukuba uthenge ntoni ukubhiyozela uSuku loMama, nolu uluhlu lwee-smartphones ezingabizi kakhulu ezifanelekileyo ukuba umama wethu ahlaziye i-smartphone yakhe yakudala.
UGoogle kunye noFitbit baya kusebenza kwizinto ezinxitywayo ezilinganisela impilo yomsebenzisi
UGoogle kunye noFitbit bazakwazisa ukunxiba ukulinganisa impilo ngokuchanekileyo. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zeenkampani zombini ezifuna ukungena kwicandelo lezempilo.
I-LG G7 ThinQ: Isiphelo esiphezulu senkampani ngoku sisemthethweni
I-LG G7 ThinQ: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esiphakamileyo sophawu lweKorea esele inikezelwe ngokusemthethweni.
I-OUKITEL K7: Ifowuni entsha ene-10.000 mAh ibhetri
I-OUKITEL K7: Isixhobo esitsha esinebhetri ye-10.000 mAh. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eza kuphehlelelwa kungekudala kwaye ime ngaphandle kwebhetri yayo enkulu.
Izipho eziphezulu zokufuna ukwazi zoSuku loMama
Fumana ngakumbi malunga nokukhethwa kwezipho zoqobo zoSuku loMama, oza koyisa ngazo umama wakho kolu suku lukhethekileyo. Ungaphoswa zezi zipho.
I-WhatsApp izakuvumela iqela levidiyo ukuba lifowune
Kwiiveki, okanye iinyanga, iifowuni zevidiyo ziya kufikelela kwiqonga lemiyalezo ye-WhatsApp, njengoko kubhengezwe nguMark Zuckerberg kwi-F8 eqale izolo.
Iinguqulelo ezimbini zeGlass Note 9 eqinisekisiweyo e-China
Iinguqulelo ezimbini zeGlass Qaphela 9 ziqinisekisiwe e-China. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esiphakamileyo sefemu esiya kuba neenguqulelo ezimbini ezahlukeneyo.
Iifowuni eziphezulu ze-smartphones zokunikela ngoMhla woMama
Ezona smartphones zihamba phambili ekunikezeleni ngoSuku loMama. Fumanisa olu khetho lweefowuni zikwelona nqanaba liphezulu ukunika kulo mhla ukhethekileyo.
IHuawei P20 Pro ivavanya olona vavanyo ludumileyo
IHuawei P20 Pro iphantsi kovavanyo lweJerryRigEverything. Fumanisa ukuba isiphelo esiphakamileyo simi kuvavanyo oludumileyo kwi-Intanethi.
I-Android Oreo ngoku iyafumaneka kwi-Galaxy S7 kunye ne-S7 Edge
Uhlaziyo kwi-Android Oreo ye-Samsung Galaxy S7 kunye neGPS S7 sele ikhona e-United Kingdom, ke ayizukulibazisa ukufikelela kwamanye amazwe.
UXiaomi uza kuvula ivenkile yakhe yokuqala e-Italiya nge-26 kaMeyi
IXiaomi izakuvula ivenkile yayo entsha eMilan ngoMeyi 26. Fumanisa ngakumbi malunga nevenkile yokuqala yohlobo lwaseTshayina kwilizwe le-transalpine eliza kufika ekupheleni kukaMeyi.
I-Samsung Galaxy A6 (2018) kunye ne-Galaxy A6 + (2018) Amaxabiso kunye neempawu eziVuzayo
I-Samsung Galaxy A6 (2018) kunye ne-A6 + (2018) zityhila amaxabiso abo. Ukongeza, iimpawu zamva nje kunye nezakutshanje kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezifanayo nazo zikhutshiwe, ziqinisekisa kwaye, kwangaxeshanye, ziphikisa uninzi oluhambahamba kwiwebhu kwezi ntsuku.
Ukucoca okokuqala kunye nevidiyo yeXiaomi Redmi S2
Xiaomi Redmi S2: Ukucaciswa kokuqala kunye nevidiyo evuzayo. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuphawu lwesiTshayina oluza kuphehlelelwa kwintengiso kungekudala.
UXiaomi ubonisa umfanekiso wokuqala weXiaomi Mi Band 3
UXiaomi utyhila umfanekiso wokuqala weXiaomi Mi Band 3. Fumanisa ngakumbi malunga nomfanekiso wokuqala wesongo sophawu esele sityhile uyilo oluza kuba nalo.
IHuawei P20 Pro yeyona nto ithengisa kakhulu kwinkampani ephezulu eNtshona Yurophu
Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso yeHuawei P20 Pro eNtshona Yurophu apho iye yaba yimpumelelo yohlobo lwesiTshayina malunga nentengiso.
UXiaomi uzokwazisa iifowuni ezimbini nge-Android One kwintengiso
UXiaomi uzakwazisa iifowuni ezimbini nge-Android One njengenkqubo yokusebenza. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zohlobo lweshishini laseTshayina zokuphehlelela iimodeli ezimbini ngale nguqulo yenkqubo yokusebenza.
Ukucaciswa okusebenzayo kwe-Samsung Galaxy S9 kuyabhengezwa
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy S9 Active, uguqulelo olunamagingxi-gingxi lweflegi yenkampani yaseKorea i-Galaxy S9, zisandula ukuvuza.
Ezona zixhobo zintlanu zibalaseleyo ze-Android Wear kunye ne-Wear OS. Fumanisa olu khetho lwezicelo onokuzifaka kwiwotshi yakho efanelekileyo.
Ividiyo yokwazisa ye-Samsung Galaxy A6 iyavuza
Emva kokuvuza kwemifanekiso yokuqala esemthethweni ye-Galaxy A6 elandelayo kunye ne-A6 +, ngoku lithuba levidiyo evela kwi-Samsung uqobo apho sinokubona khona isiphelo sendlela
Ifowuni ebalulekileyo ngoku inokuthengwa e-UK nase-France
Njengoko inkampani iqinisekisile kwi-MWC edlulileyo, Ifowuni ebalulekileyo kwaye inokuthengwa eYurophu, ubuncinci e-United Kingdom nase-France, nase-Japan.
U-Huawei usebenze kwenye indlela yokusebenza kwi-Android
IHuawei iye yaphuhlisa inkqubo yayo yokusebenza. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zebrendi yaseTshayina ebizenzela eyayo inkqubo yokusebenza.
Ukucoca imifanekiso yokuqala yeNokia X
Uyilo lweNokia X luvuze kwimifanekiso yalo yokuqala. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ekumgangatho ophakathi kwifemu eza kuthi thaca ngoMeyi.
IHuawei kunye neGal Gadot (Umfazi oMangalisayo) bazenza isidenge ngokubhengeza iHuawei Mate 10 Pro
Umlingisi uGal Gadot kunye noHuawei bazenza isidenge ngokusebenzisa i-iPhone ukubhengeza iHuawei Mate 10 Pro eMelika.
IMotorola ilindele ukuthengisa iiyunithi ezingama-30 ezigidi zeMoto G6
IMotorola ilindele ukuba iMoto G6 ithengise iiyunithi ezingama-30 ezigidi. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa okulindelweyo kweefowuni zayo ezintsha.
U-Huawei utyhila ukuba banamalungelo abenzi abhalisiweyo angama-74.326
U-Huawei ungumnikazi wamalungelo abhalisiweyo angama-74.326 kwihlabathi liphela. Fumanisa ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi wohlobo lwesiTshayina oluzibonakalise njengegama eliphambili kuphando nakuphuhliso.
I-OnePlus 6 iya kubonisa ukurekhodwa kwevidiyo okuhamba kancinci
I-OnePlus 6 iya kuba nokurekhodwa okucothayo kwevidiyo. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kuba nalo eli liphezulu.
Iimpawu kunye neenkcukacha ezichaziweyo zeHTC U12 yiVerizon
I-HTC U12 ivuzisisiwe kunye nokubalulwa kwayo kunye neempawu kwiphepha lomsebenzisi waseMelika uVerizon. Esi sixhobo siza kuhlulwa njengeflegi yefemu yaseTaiwan kunye neyona nguqulelo inamandla, iHTC U12 Plus (U12 +), enye ikwanike nento eninzi yokuthetha ngayo.
Ukucaciswa okunokubakho kwithebhulethi yeXiaomi Mi Pad 4
Ukucaciswa kwezobuchwephesha ezahlukeneyo kunye neempawu zethebhulethi yeXiaomi Mi Pad 4, eyindlalifa yeMi Pad 3 esiyibonileyo kunyaka ophelileyo. Oku kuza kuza nekhusi elinomdla, kunye neprosesa enamandla ye-Qualcomm Snapdragon 660, kunye nokunye. Siyakuxelela!
UXiaomi uzibophelele ekugcineni amaxabiso eefowuni zakhe
UXiaomi uza kugcina amaxabiso eefowuni zakhe. Fumanisa ngakumbi malunga nezizathu zokuba inkampani yaseTshayina inganyusi ixabiso lezixhobo zayo.
IHuawei iyaphandwa eMelika
I-United States ngoku iphanda iHuawei. Fumanisa ngakumbi malunga nophando olwenziwa yinkampani eMelika ngokwenza ushishino ne-Iran.
I-LG G7 ThinQ ihamba ngeGeekBench ene-4GB ye-RAM kunye ne-Snapdragon 845
I-LG ibonakala ngathi ilungile nge-LG G7 ThinQ, i-smartphone elandelayo ephezulu ethi inkampani esekwe eMzantsi Korea izakusibonisa kwikhathalogu yayo ebanzi yeselfowuni. Esi sixhobo sisandula ukudlula kwiGeekBench, ibhentshi eyaziwayo. Siyakwandisa!
I-LG iqinisekisa iimpawu zesikrini se-G7 ThinQ
I-LG iqinisekisile ukubonakaliswa kweflegi yayo ezayo ye-G7 ThinQ
INokia X6 inokuboniswa ngo-Epreli 27
INokia X6 iya kutyhilwa ngokusesikweni nge-27 ka-Epreli. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yoluhlu oluphakathi lwefowuni enokuthi iboniswe ngoLwesihlanu.
IXiaomi Mi 6X ngoku isemthethweni: Yazi zonke iinkcukacha zayo
Xiaomi Mi 6X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni yohlobo lwentengiso yaseTshayina olwavezwa ngokusemthethweni namhlanje.
Iqinisekisiwe: I-OnePlus 6 iya kuziswa ngoMeyi 17 e-China
I-OnePlus 6 iya kutyhilwa ngokusesikweni ngoMeyi 17 e-China. Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kwefowuni ephezulu ngoMeyi, esele iqinisekisiwe yinkampani uqobo.
I-Galaxy A3 2017 iqala ukuhlaziya kwi-Android Oreo
Uhlaziyo ekudala lulindelwe lwe-Android Oreo lweGPS A3 2017 sele iqalile ukufumaneka kubasebenzisi abahlala eRashiya, ke ayizukuthatha ixesha elide ukufikelela kuyo yonke iYurophu.
Esi sisithuthuthu esitsha seXiaomi sombane esingaphantsi kwe-1.000 euro
I-Super Soco: Isithuthuthu sombane sikaXiaomi esingaphantsi kwe-1.000 euro. Fumanisa ngakumbi ngesi sithuthuthu sombane kuhlobo lwaseTshayina oluza kuphehlelelwa kwintengiso kungekudala.
UXiaomi usungula iifowuni ezininzi nge-Android One
UXiaomi uzokwazisa iifowuni ezininzi nge-Android One.Fumana okuninzi malunga nezicwangciso zohlobo lwesiTshayina zokusebenzisa olu hlobo lwe-Android kwiifowuni zabo.
Umnyhadala wabalandeli be-HOMTOM: Thatha ithuba lesaphulelo kwiifowuni ze-HOMTOM
Thatha ithuba lesaphulelo kwiifowuni ze-HOMTOM kwi-TomTop. Fumana ngakumbi malunga noku kukhuthazwa apho unokuthenga khona iifowuni zebhrendi ngexabiso elifanelekileyo kude kube ngu-Epreli 30.
Imifanekiso yokuqala yendlela itheminali elandelayo ye-Samsung yokufika kwintengiso iya kuba: I-Samsung Galaxy A6 kunye ne-A6 +
UMeizu uza kuphehlelela i-Android Go kulo nyaka. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni ekumgangatho ophantsi eza kuphehlelelwa uphawu lwaseTshayina kwintengiso kulo nyaka.
I-LG G7 ThinQ: Uyilo lwefowuni luye lwavuza ngokupheleleyo. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lwesiphelo esitsha sebrendi esele sivuziwe.
I-OnePlus 6 iya kuba neglasi eyenziwe ngasemva. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo oluphezulu lwenkampani oluya kwenziwa ngeglasi.
Izolo, uMeizu wazise ngefowuni yakhe entsha. Sithetha nge-Meizu 15, i-Meizu 15 Plus, kunye ne-M15, ekwabizwa ngokuba yi-Meizu 15 Lite, eyona nguqulelo ithobekileyo kwezi zimbini zokuqala zikhankanyiweyo. Yazi zonke iinkcukacha zobuchwephesha kunye neempawu zezi zixhobo!
I-POP ye-Wireless kunye ne-Halo Laser Earphones: Iifowuni ezintsha zeMeizu
I-POP ye-Wireless kunye ne-Halo Laser Earphones: Fumanisa ngakumbi ngee-headphone ezintsha ezivela kuhlobo lwaseTshayina ezithiwe thaca kule mpelaveki.
I-OUKITEL WP5000: Ifowuni enganyangekiyo neemeko ezigabadeleyo ngexabiso elifanelekileyo
I-OUKITEL WP5000: Ifowuni erhabaxa ngexabiso elifanelekileyo. Fumana ngakumbi malunga nefowuni yohlobo lophawu ngoku efumanekayo ngexabiso lentengiso.
Uhlaziyo lweGalaxy S7 kwi-Android Oreo ilibazisekile de kwaba ngoMeyi
Iindaba zamva nje eziza kuthi ezinxulumene neGPS S7 ibonisa ukuba ukumiliselwa kwenguqu yokugqibela ye-Android Oreo kulibazisekile inyanga, kude kube phakathi ku-Meyi.
Imifanekiso yokuqala yoyilo lwe-Samsung Galaxy A6 kunye ne-A6 +
Imifanekiso yokuqala yokuba i-Galaxy A6 kunye ne-Galaxy A6 + ziya kujongeka njani zisandula ukuvuza ngemifanekiso ekhutshiweyo evela kumenzi wecala.
Ii-Smartphones «i-gamer» icandelo elonyukayo
Ngokuqinisekileyo uvile ngee-smartphones ze-gamer, iifowuni ezinamandla ongezelelweyo okubonelela ngamava omdlalo weqonga ofana nalowo wekhonsoli.
Dibana neBluboo S3 ngesibonelelo esimangalisayo sokumiliselwa
Fumana iBluboo S3 ngexabiso elingenakuhlawulwa. Unokufumana i-smartphone nge-8000 mAh ibhetri, i-6 "isikrini kunye nekhamera ye-Samsung ye-21Mpx + 5 Mpx engaphantsi kunokuba ucinga.
I-LG G7 ThinQ iya kuba neqhosha layo kuMncedisi kaGoogle
I-LG G7 ThinQ iya kuba neqhosha elizinikeleyo kuMncedisi kaGoogle. Fumanisa ngakumbi malunga neqhosha eliya kuba kwifowuni ephezulu eya kuthi ibaluleke kakhulu kubukrelekrele bokuzenzela.
IXiaomi Black Shark ithengiswe ngosuku lwayo lokuqala kwintengiso
IXiaomi Black Shark sele ithengisiwe eTshayina kusuku lokuqala ithengiswa. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yomnxeba wokuqala wokudlala wegama lesiTshayina elithengiswe ngemizuzwana embalwa.
Iimpawu kunye nokucaciswa kweXiaomi Mi 6X ngokoluhlu olutsha lwe-TENAA
I-TENAA ityhila uluhlu olutsha lweempawu zeXiaomi Mi 6X eqinisekisa kwaye iphikisana nezinto ezininzi esele sazi. Eli nqanaba liphakathi liza kufika ngo-Epreli olandelayo we-25 ngomnyhadala wentetho eqinisekiswe yinkampani yaseTshayina uXiaomi.
Iimpawu ze Meizu 15, 15 kunye neM15 ziyahluzwa
Ngaphantsi kosuku emva kokunikezelwa kwe-Meizu 15, iimpawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha kwesi sixhobo zihluziwe kunye nezinye izinto ezimbini ezahlukeneyo, iMeizu 15 Plus, isiphelo esineeprosesa ezisibhozo zeSamsung Exynos 8895, kunye IMeizu M15, ibanga eliphakathi lixhotyiswe nge-SD625 SoC.
Awona maqhinga angcono kwi-smartwatch yakho nge-Android Wear
Awona maqhinga abalaseleyo eewotshi nge-Android Wear. Fumanisa olu luhlu lwamaqhinga kubasebenzisi ngewotshi ene-Android Wear. Ngale ndlela uya kufumana okuninzi kwiwatchwatch yakho.
I-LG K11 kunye ne-K9: Uluhlu olutsha lokungena kwenkampani lufika eYurophu
I-LG K9 kunye ne-K11: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezisezantsi ezisezantsi ezijonga ukuvuselela inqanaba labo lokungena.
Izibonelelo ngesaphulelo se-60% ngexesha le-eBay Super Weekend
I-EBay's Super Weekend ibuyela emfazweni ngezaphulelo ukuya kuthi ga kwi-60% kwizixhobo ze-elektroniki zazo zonke iimveliso, ngakumbi kwii-smartphones ze-Android
Dibana ne-Ulefone Power 5, iselfowuni enebhetri enkulu ye-13000mAh
I-Ulefone, inkampani yaseAsia, isizisela i-Ulefone Power 5, indawo ekumgangatho ophakathi ye-Android enebhetri enkulu neyoyikekayo engama-13.000mAh ethembisa ngeentsuku ezininzi zokuyisebenzisa ngaphandle kokukhathazeka ngetshaja kunye neplagi. Sinikela kuwe!
INubia Red Magic: I-smartphone yokudlala entsha kwintengiso
INubia Red Magic: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni yokuqala yokudlala evela kuhlobo lwesiTshayina, esele ityhilwe ngokusemthethweni kumsitho.
IMoto E5, i-E5 Plus kunye ne-E5 Dlala: Uluhlu lokungena lweMotorola luyaphucuka
IMoto E5, i-E5 Plus kunye ne-E5 Dlala: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni. Fumana ngakumbi malunga noluhlu lwenqanaba lokungena elitsha kwifemu ethe yatyhilwa ngokusemthethweni namhlanje.
IMotorola Moto G6, G6 Plus kunye neG6 Dlala: Uluhlu oluphakathi luyahlaziywa
I-Moto G6, i-G6 Plus kunye ne-G6 Play: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni. Fumana zonke iinkcukacha malunga nodidi oluphakathi lwegama elitsha esele linikezelwe ngokusemthethweni.
I-Leagoo S10, iselfowuni ejoyina ikhathalogu yenkampani eboniswe kwiMithombo yeHlabathi ye2018 eHong Kong
ILeagoo iveza iflegi yayo elandelayo, iLeagoo S10, iselfowuni ye-Android enekhamera engasemva kathathu kunye nomfundi ofunda ngeminwe phantsi kwesikrini. Ukongeza, uveza izicwangciso zakhe kwimakethi yangoku, kunye nendlela eya kuthi ayithathe kwicandelo lokuthengisa. Siyakwandisa!
IHuawei ayicwangcisi ukuthengisa iiprosesa zayo zaseKirin kwezinye iimveliso
IHuawei ayizukuthengisa iiprosesa zaseKirin kwezinye iimveliso. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani kunye nokuba kutheni bengafuni ukuthengisa iiprosesa zabo kwezinye iinkampani.
Imbeko 10: Isiphelo esitsha esiphakamileyo ngoku sisemthethweni
Imbeko 10: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa konke malunga nesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina oluthi lwaziswa ngokusemthethweni e China namhlanje. Ukucaciswa kwayo, ixabiso kunye nokufika kwayo kwintengiso.
I-Samsung Galaxy A5 2017 iqala ukufumana i-Android Oreo 8.0
Uhlaziyo ekudala lulindelwe lwe-Android Oreo lweGPS A5 2017 sele iqalile ukubakho ukukhuphela.
INokia 7 Plus ngoku iyafumaneka eSpain
INokia 7 Plus ngoku inokuthengwa ngokusemthethweni eSpain. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha yophawu eboniswe kwi-MWC 2018 kwaye sele iseseSpain.
I-ZTE inokushiywa ngaphandle kwe-Android ngenxa yesithintelo sase-US
I-ZTE inokulahla iphepha-mvume layo le-Android ngenxa yesithintelo eMelika. Fumana ngakumbi malunga neengxaki inkampani ejongene nazo ngenxa yokuvalwa kwayo.
Ezona Fowuni zinamandla zi-10 ngo-Matshi 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-AnTuTu isizisela uluhlu lwezona zixhobo zinamandla kwintengiso yenyanga ngenyanga, apho, kwesi sihlandlo, sinokuthi siqaphele ukongezwa kweeflegi ezimbini ezintsha zeSamsung, i-Galaxy S9 kunye ne-S9 Plus, ii-smartphones zangoku.
Ukucoca iimpawu zeNubia Z18 ngaphambi kokunikezelwa kwayo
I-Nubia Z18: I-Filtered inkcazo yesiphelo esiphakamileyo. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina ekucaciswe ukuba sele kuvuza.
IBluboo S3, iselfowuni yoqoqosho kunye nebhetri ye-8500mAh
Sinikela kuwe iBluboo S3, isiphelo sendlela apho zonke iimpawu zayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha zaziwa ngeentsuku ezininzi ngoku, kwaye ziya kufumaneka zithengiswe ngeBanggood ukuqala ngomso, ngo-Epreli 18 ngexabiso elingaphantsi kwe-euro ezingama-165.
Isamsung yazisa ngohlobo olukhethekileyo lweGalaxy S9 Formula 1
IVodafone ngokusebenzisana neRed Bull kunye neSamsung, basungule uhlelo olukhethekileyo lweGPS S9 kunye neGPS S9 kumsitho weAustria Grand Prix ezakubanjwa nge-1 kaJulayi.
Kutyhilwe imifanekiso yokuqala esemthethweni yeXiaomi Mi 6X
Imifanekiso yokuqala esemthethweni yeXiaomi Mi 6X sele iyinyani. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lwefowuni yohlobo lwesiTshayina esele ityhilwe ngokupheleleyo.
Iingxelo zabaThengi zibeka i-Galaxy S9 njengeyona smartphone ibalaseleyo kwintengiso
Ngokomzimba ozimeleyo waseMelika, iiNgxelo zabaThengi, i-Galaxy S9 kunye ne-S9 + zezona zibalaseleyo zii-smartphones ezikhoyo ngoku kuluhlu oluphezulu.
I-Samsung patent i-screen-skrini sonke esinotshi
Isamsung inelungelo elilodwa lomenzi kwifowuni yesikrini sonke enotshi. Fumanisa ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi wechiza elimela ifowuni nenotshi.
I-OnePlus 6 ayinakungena manzi ngokwevidiyo entsha
I-OnePlus 6 iya kukhusela amanzi. Fumana ngakumbi malunga nevidiyo eyilayishwe yinkampani ngokwayo eqinisekisa ukuba ifowuni ayizukungena manzi
I-Sony Xperia XZ2 yeNkulumbuso isemthethweni ngekhamera ezimbini kunye nescreen se-4K
Sikuxelela zonke iinkcukacha ngePrimiyamu yeSony Xperia XZ2, esona sixhobo sinamandla kulo lonke uthotho
Unboxing ye-Oukitel WP5000
Kwiintsuku ngaphambi kokufika kwintengiso ye-Oukitel WP5000, sikubonisa ividiyo apho sinokubona khona ukungabikho kwebhokisi ngokupheleleyo kwesi sixhobo kunye nezinye zeempawu zayo eziphambili zokusebenza.
IXiaomi Mi A1 iphelile kwisitokhwe eIndiya
IXiaomi Mi A1 ithengise eIndiya. Fumana ngakumbi malunga nokuphela kwesitokhwe sefowuni esithetha ukuba iXiaomi Mi A2 izakubetha ezivenkileni kungekudala.
I-Honor 10 ihamba nge-TENAA kwaye ityhila ubuchwephesha bayo
I-Honor ibonakala ngathi i-Honor 10 ilungile, isiphelo sayo esilandelayo esiza kuthi sifike kwintengiso kwinyanga ezayo ngawo onke amandla okulwa nezinye iiflegi zezinye iifemu enkosi kwiimpawu zayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezithi i-TENAA, umlawuli wase-China kunye nesiqinisekiso, isixelele kutyhilwa nje. Siyakuxelela!
Umfanekiso wokuqala wokwenene weXiaomi Mi 6X ulapha
Umfanekiso wokuqala osemthethweni weXiaomi Mi 6X sele uyinyani. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluza kuphehlelelwa kungekudala kwimarike kwaye iya kuboniswa ngokusesikweni ngo-Epreli 25.
I-HMD Global yokwazisa ngeNokia X nge-27 ka-Epreli
INokia X iya kutyhilwa ngokusesikweni nge-27 ka-Epreli. Fumana ngakumbi malunga nokutyhilwa komhla wefowuni entsha kraca kamva kule nyanga.
Uyifaka njani i-Emoji yenyani yeDonald Duck kwiGalaxy S9
Ngoku singonwabela i-AR Emoji kaDonald Duck kwiGPS S9 kunye neGPS S9 +. Ukuba awuyazi ukuba ungayifaka njani, kweli nqaku sichaza indlela yokwenza.
Ukucoca umfanekiso wokuqala weNubia Red uMtyholi
UNubia Red uMtyholi: Umfanekiso wokuqala wegama lokudlala lomnxeba waseTshayina sele uvuza, ke sele siyazi into ekufuneka iboniswe yifowuni. Nangona ungaboni kakhulu.
Iphosta entsha iqinisekisa ukumiliselwa kweXiaomi Mi 6X
Ipowusta yokuqala yeXiaomi Mi 6X sele ityhiliwe. Fumanisa ipowusta yokuqala yokwazisa yefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina oluya kuthi luboniswe ngo-Epreli 25.
Ukucocwa kweenkcukacha zeVivo V9 yoLutsha
Vivo V9 Ulutsha: Ukucaciswa kweefowuni ezivuzayo. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni evela kuhlobo lwesiTshayina ekulindeleke ukuba lubethe kwimarike kungekudala.
Ukucaciswa kobuchwephesha beXiaomi Mi 6X ngokwe firmware yayo
Funda malunga neenkcukacha zobuchwephesha zeXiaomi Mi 6X ngokwefirmware evuzayo yakutshanje yale fowuni, kunye neenkcazo ezininzi zobuchwephesha kunye neempawu ezihluzwe nguTENAA, umlawuli waseTshayina kunye nesiqinisekiso sokuba zonke izixhobo eziza kuthengiswa kwilizwe elikhulu laseAsia zidlule. .
I-Samsung SM-G8850 ivela kwi-AnTuTu kunye neenkcukacha zayo eziphambili
I-Samsung SM-G8850 isandula ukuvuza kwi-TENAA kunye neempawu zayo kunye neenkcukacha eziphambili zobuchwephesha esiza kuthetha ngazo apha ngezantsi. Phakathi kwezona zibalaseleyo, sifumana iprosesa ye-Qualcomm Snapdragon 660 engundoqo, i-Android 8.0 Oreo, kunye ne-2.220 x 1.080 p screen.
UVernee uzakwazisa ngohlobo olukhethekileyo lweVernee X ene6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina
Isiphelo sendlela esilandelayo esiza kuqaliswa yinkampani yaseAsia iVernee yiVernee X1, imodeli ene-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina nje kwee-euro ezingama-200.
Xiaomi Black Shark: I-brand yokudlala ye-smartphone ngoku isemthethweni
Xiaomi Black Shark: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga ne-smartphone yokuqala yokudlala kwi-Chinese brand ebhengezwe namhlanje.
I-LG iya kubonelela ngohlaziyo olukhawulezileyo enkosi kwiziko lophuhliso lwesoftware
I-LG ivula iziko lophuhliso ukuphucula isoftware. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani ngeli ziko abafuna ukwazisa ngalo ukuphuculwa kwesoftware yeefowuni.
I-OnePlus 5T ithengiswa eYurophu
I-OnePlus 5T iphelile kwisitokhwe kulo lonke elaseYurophu. Fumana ngakumbi malunga nefowuni esele ithengisiwe eYurophu, kwiiveki nje ezimbalwa emva kokuba ithengisiwe eMelika.
UMtyholi oBomvu: I-smartphone yokudlala yeNubia iza kufika ngo-Epreli 19
I-Nubia ityhila umnxeba wokudlala we-Red Devil ngo-Epreli 19. Fumanisa ngakumbi malunga nomnxeba wokuqala wokudlala wegama laseTshayina oya kuthi thaca ngokusemthethweni kwiveki ezayo.
UXiaomi uza kufaka ifowuni yakhe entsha ngo-Epreli 25, mhlawumbi iXiaomi Mi 6X
UXiaomi uza kuzisa ifowuni yakhe entsha ngo-Epreli 25. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zorhwebo lwaseTshayina lokwazisa isixhobo esitsha kamva kule nyanga.
I-Huawei Y6 2018 kunye ne-Huawei Y7 2018: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezintsha ze-Y ezivela kuhlobo lwesiTshayina ezithe zatyhilwa namhlanje.
I-Samsung SM-G8850 ivela kwi-TENAA. Ngaba iya kuba yi-Samsung Galaxy S9 Mini?
Kutshanje i-Samsung SM-G8850, enokubakho kwi-Samsung Galaxy S9 Mini evela kwifemu yase-Korea yase-Korea, sele ivuza nje. Ngokuka-TENAA, esi sixhobo siza sixhotyiswe ngescreen se-5.8-intshi Super AMOLED kwisikrini esinobubele se-QuadHD + se-2.960 x 1.440 pixels, ukongeza kwezinye izinto ezintle kunye nokubalulwa.
Ividiyo emfutshane yeXiaomi Black Shark iyavuza
Kusuku olungaphambi kokunikezelwa ngokusesikweni kweXiami Black Shark, ividiyo emfutshane yesiphelo iye yavuza kwinethiwekhi yoluntu yaseTshayina, uWeibo.
Inkqubo entsha yeHuawei P20 ifumana i-4 ngaphandle kwe-10 ngokulungiswa ngokwe-iFixit
Ngezandla zabafana iFixit, iHuawei P20 Pro isandula ukudlula, isiphelo sendlela esisandula kufumana amanqaku ebesingawaqhelanga.
Ukucoca okokuqala kwe-LG V35 ThinQ
I-LG V35 ThinQ: Ukucaciswa kokuqala kuvuza. Fumanisa ngakumbi malunga nokubalulwa kokuqala kwesiphelo esitsha sebrendi esele sivuziwe.
Yazi uluhlu lweefowuni ze-Android eziya kuhambelana neFortnite!
I-Fortnite, omnye weyona midlalo ithandwayo ngalo mzuzu, ityhile uluhlu lweefowuni ze-Android eziya kuthi zihambelane nomdlalo ngexesha lokukhululwa kwiVenkile yeGooglePlay. Sikwazisa!
Ivenkile kaGoogle iyayeka ukuthengisa isizukulwana sokuqala sePixel
Isizukulwana sokuqala sePixel asisathengiswa kwiVenkile kaGoogle. Fumanisa ngakumbi malunga nokuphela kwentengiso yeefowuni zokuqala zenkampani kwivenkile esemthethweni
I-Samsung Galaxy J7 Duo sele ikwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani
Inkampani yaseMzantsi Korea i-Samsung sele inayo i-Samsung Galaxy J7 Duo esele ilungile, indawo ekumgangatho ophakathi osele uchaziwe kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Samsung India ngexabiso le-16.990 rupees. Esi sixhobo siza noyilo oluqhelekileyo kunye nesitayile sesiphelo sendlela J yohlobo lophawu. Yazi!
Sinikela kuwe iNubia Z18 Mini, udidi oluphakathi lwenkampani
I-Nubia Z18 Mini, umahluko omncinci we-Z18, olu luhlu luphakathi sele lukhutshiwe kunye nazo zonke izibonelelo kunye nezibonelelo, kwaye akukho kubi konke konke, kuba ngenxa yeempawu kunye nezibonelelo zalo, ibekwe njengendawo efanelekileyo ipremiyamu yoluhlu. Sinikela kuwe!
I-Blackview P10000 Pro: 11.000 mAh ibhetri ngokusetyenziswa okuphantsi
I-Blackview P10000 Pro: Dlulisa uvavanyo lokusetyenziswa kwebhetri. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni ethe yenziwa kuvavanyo lwebhetri kwaye yadlula ngaphandle kwengxaki.
IXiaomi ivula i-beta yehlabathi jikelele ye-Android Oreo ye-Mi 5, Mi MIX kunye neMi Qaphela 2
IXiaomi Mi 5, Mi MIX kunye neMi Qaphela 2 bafumana i-Android Oreo beta. Fumana ngakumbi malunga nenkqubo ye-beta evula ngokusesikweni iifowuni ezintathu zohlobo lwesiTshayina.
I-ZTE irejista iAxon 9, Axon 9 Pro kunye nezinye iimodeli
I-ZTE ibhalisa i-Axon 9 kunye ne-9 Pro kunye nezinye iifowuni. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu lweefowuni esele uphawu lubhalisile kwaye luza kufika ezivenkileni ngo-2018.
I-Ulefone S7 Go: Ifowuni entsha ene-Android Go (uHlelo lwe-Oreo). Fumanisa ngakumbi malunga nemodeli entsha yohlobo lwaseTshayina oluza kuthi kungekudala lufike kwimarike.
I-LEAGOO S9: Oda kwangaphambili i-Notch yefowuni nge-1,99 yeedola
Hlela kwangaphambili i-LEAGOO S9 ngexabiso le- $ 1,99. Fumanisa ngakumbi malunga noku kukhuthazwa okukhethekileyo kwifowuni yohlobo lwesiTshayina oluya kuthengisa kwimarike kungekudala.
I-Honor 7C kunye ne-7A zifika eSpain kwiiveki emva kwengcaciso
I-Honor 7C kunye ne-Honor 7A zifika, ngokusesikweni, eSpain, kwaye ziya kufumaneka ukuthengiswa ukusukela kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ezi zixhobo zimbini zichazwe ngokufanayo kunye neempawu ziye zasungulwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo e-China. Siyakwandisa!
Ngokuka-OnLeaks, inkampani yaseKorea i-LG izakuzisa ngokusesikweni i-LG G7 Thinq nge-2 kaMeyi eNew York.
Izizathu ezili-10 zokuthenga i-Oukitel WP5000 entsha
Ukuba ucwangcisa ukuvuselela i-smartphone yakho, unokuba nomdla wokuthathela ingqalelo i-Oukitel WP5000, isiphelo sendlela esimnandi kunye nezinye izinto ezinomdla esinazo kweli nqaku.
Ezinye iinguqulelo zeXiaomi Mi 6 zithengisiwe
Iinguqulelo ezininzi zeXiaomi Mi 6 sele zithengisiwe. Fumana ngakumbi malunga nezi ndaba zithetha ukuba ukufika kweXiaomi Mi 7 ngoku kusondele kakhulu kunangaphambili.
Imifanekiso emitsha evuzayo yeXiaomi's Black Shark
Imifanekiso emitsha yeXiaomi Black Shark ivuza. Fumana ngakumbi malunga nefowuni yeXiaomi eza kwintengiso kungekudala kwaye ivelisa ulindelo olukhulu.
Ukucoca iprototype yeZTE Iceberg: Iscreen esine-notch ephindwe kabini
I-ZTE Iceberg: Ukucoca uyilo ngenotshi ephindwe kabini kwiscreen. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eyothusa ngokubheja kwi-notch ephindwe kabini kwiscreen sayo.
I-Smartisan Nut 3 ibonakaliswe ngebhetri enkulu ye-4000mAh
I-Smartisan isizisela i-Smartisan Nut 3, iselfowuni entsha eza noyilo oluhle kwaye lincinci le-7.16mm ubukhulu, kunye nebhetri enkulu ye-4.000mAh ethi, ngaphandle kwamathandabuzo, iya kusinika ukuzimela okuhle okuya kusenza ulibale iplagi kunye netshaja okwethutyana
IHTC U12 Plus iza neQualcomm Snapdragon 845 kunye ne-8GB ye-RAM ngokokuvuza okutsha
I-HTC U12 isandula ukuvuza kunye neendlela zayo zobuchwephesha. Esi sixhobo siza kuza neyona nto intle yaseTaiwan, ethi inoxanduva lokunyusa impumelelo uphawu ebelinalo ngeyona mihla yakhe ibalaseleyo. Siyakuxelela!
Ukuvuza okutsha kungqina uyilo lweMoto G6 Plus
Ukuvuza okutsha kwemifanekiso yeMoto G6 Plus kuqinisekisa uyilo olwavuza ngaphambili.
I-OnePlus itsala i-OxygenOS beta yakutshanje yazo zonke iimodeli ezixhaswayo
Abafana e-OnePlus banyanzelwe ukuba barhoxe zonke ii-bets ze-Oxygen OS de kube ngoku babenazo abasebenzisi bezi zixhobo ngenxa yokusebenzisa kakhulu ibhetri abayinikelayo
I-Honor 10 iya kuba nemihla emibini yokubonisa
I-Honor 10 iya kupapashwa ngokusemthethweni e-China. Fumanisa ngakumbi malunga nomsitho apho uphawu luye lwaququzelela ukubonisa umnxeba e-China. Umsitho oza kubanjwa ngo-Epreli 19.
I-Android 8.0 ngoku iyafumaneka kwi-Galaxy Note 8 eSpain
Uhlaziyo ekudala lulindelwe lwe-Android Oreo 8.0 ye-Galaxy Note 8 isandula ukufika ngokusemthethweni eSpain, ke ngoko baleka ngokukhawuleza ukuba uyikhuphele kwaye ukonwabele iindaba ezisinika zona.
UXiaomi uzokwazisa iifowuni ezimbini nge-Snapdragon 670 kwintengiso
Iifowuni ezimbini zeXiaomi ziya kubandakanya i-Snapdragon 670 njengeprosesa. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zebrendi yaseTshayina eza kusebenzisa le processor kwiifowuni zayo ezimbini kulo nyaka.
Uyilo lwe-OnePlus 6 lutyhilwe kuguqulo olutsha
Ukuhanjiswa okucociweyo kokutsha koyilo lwe-OnePlus 6. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni yohlobo lwesiTshayina oluza kufika kungekudala kwimarike kunye nemifanekiso emitsha yoyilo lwayo oluhluziweyo.
IHuawei izakuqala ukuvelisa iKirin 980 kule kota
IHuawei izakuqala ukuveliswa ngobuninzi kweKirin 980 kule kota. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zomenzi waseTshayina kunye neprosesa yayo entsha yokuphela.
Okubalulekileyo kuya kuyiphucula ikhamera yeselfowuni yokuqala kunye neFowuni ebalulekileyo elandelayo
Ifowuni eyilwe ngumsunguli wenkampani u-Andy Rubin, Ifowuni ebalulekileyo, ifumana ukugxeka okukhulu kwiikhamera zayo kuba umgangatho wee-sensors zayo azilunganga njengoko kufanelekile. Kodwa oku malunga nokutshintsha nge-smartphone yakho elandelayo. Siyakwandisa!
UXiaomi ulindele ukugqitha kwi-120 yezigidi zeefowuni ezithengiswe kwi-2018
UXiaomi ufuna ukuthengisa iifowuni ezizigidi ezili-120 ngo-2018. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani yaseTshayina ezifuna ukugqitha eli xabiso lentengiso kulo nyaka wonke.
I-Meizu 15 iya kuziswa ngokusesikweni ngo-Epreli 22
I-Meizu 15 iya kuboniswa ngo-Epreli 22 ngokusemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwesiphelo esiphakamileyo sophawu lwesiTshayina esiza kuboniswa ekupheleni kwale nyanga ka-Epreli.
Indlela yokuthatha iifoto-skrini kwi-Samsung Galaxy S9
Uyithatha njani imifanekiso-skrini kwi-Galaxy S9. Fumanisa iindlela ezintathu esinokuzisebenzisa ukufumana umfanekiso-skrini kwifowuni ephezulu ye-Samsung.
Kutyhilwe iinkcukacha zokuqala ze-Honor 10
Hlonipha i-10 yokuqala ecacisiweyo. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwentengiso yaseTshayina esisele sisaziwa kwaye sele sineenkcukacha zokuqala ezisemthethweni.
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Samsung Galaxy A6 kuhluziwe
Funda malunga neenkcukacha zobuchwephesha ze-Samsung Galaxy A6, izixhobo ezibini esele zilungisiwe yinkampani yaseMzantsi Korea, kwaye sinokubona ngexesha elifutshane kakhulu. Sikunika iinkcukacha!
Ungalutshintsha njani ulungelelwaniso lwamaqhosha kwi-Galaxy S9
Utshintsha njani iodolo yamaqhosha kwiscreen seGPS S9. Fumanisa indlela elula onokutshintsha ngayo ukulandelelana kwamaqhosha kwiscreen esiphakamileyo.
Ngalo lonke ixesha i-terminal entsha isaziswa kwintengiso, ii-wallpapers yenye yezona zinto zifunwayo emva kweempawu. Kule nqaku sikubonisa zonke iimali zeHuawei P20 ukuze ukwazi ukuyikhuphela kwisixhobo sakho.
Isamsung inokumilisela iiG3 J3s ezahlukeneyo ngo-2018
Isamsung iya kukhupha iinguqulelo ezintathu zeGlass J3 kulo nyaka. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani zokuphehlelela ezintathu zeefowuni ezisezantsi kulo nyaka.
IXiaomi Mi 7 inokuba nesenzwa seminwe phantsi kwescreen ngokwe-CEO yayo
IXiaomi Mi 7 iya kuba nenzwa yeminwe kwiscreen. Fumanisa ngakumbi malunga nomyalezo ovela kwi-CEO yenkampani ethi isiphelo esiphakamileyo siya kuba nesenzi sokudibanisa iminwe phantsi kwescreen.
IPanasonic Eluga Ray 550: Ifowuni entsha kraca ethe yasungulwa kwimakethi yaseIndiya
Sikubonisa iPanasonic Eluga Ray 550, i-terminal eneempawu kunye nezibonelelo eziyibeka njengefowuni ekumgangatho ophantsi egqibeleleyo ye-Android. Le smartphone iza ixhotyiswe ngohlobo oluthile lobuchwephesha, kodwa ihlengahlengiswe kwixabiso lesiseko eliza nalo mobile. Sinika iinkcukacha kuwe!
Ukuphonononga iXiaomi Mi Inqaku 3
Apha ndiyakushiya, emva kweentsuku ezilishumi zokusebenzisa kakhulu, olona hlaziyo lugqibeleleyo lwevidiyo ngeSpanish yeXiaomi Mi Qaphela 3, isiphelo esiphezulu ngexabiso eliphakathi eliphakathi.
Ushicilelo lweshishini lweSamsung S9: Inguqulelo yeenkampani ifika eSpain
Ushicilelo lweshishini lweSamsung S9: Inguqulelo yeGPS S9 yeenkampani. Fumana ngakumbi malunga nolu hlobo luphezulu lwefemu efika ngokusemthethweni eSpain.
IArchos Saphir 50X: Ifowuni entsha erhabaxa enebhetri enkulu
IArchos Saphir 50X: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuSungulwa. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha enqabileyo evela kuphawu lwesiFrentshi esele ithengiswa ngokusemthethweni eYurophu.
Nge-Epreli 19, kuzakufakwa usapho olutsha lwe-Motorola Moto G6
IMotorola ibhengeze isimemo kumsitho wokumiliselwa oza kubakho nge-19 ka-Epreli eSao Paulo, eBrazil, izinto ezininzi ezimangazayo ezinokuba sisiboniso seMoto Moto G6 esele ihletywe. Sikunika iinkcukacha!
UGoogle ususa isithintelo kwinani lezixhobo ezingaqinisekiswanga yinkampani
Inkampani yokukhangela iyisusile enye yezithintelo ezibekelwe izixhobo ezingezizo ezenkampani.
Iindlebe zokuqala ezingenazingcingo ze-OnePlus ziya kubizwa ngokuba yi-OnePlus Bullet Wireless kwaye ziya kwaziswa nge-OnePlus 6.
I-OnePlus ijongeka ngathi ifuna ukubambelela entloko kwicandelo lefowuni engenazingcingo kwaye iya kuphehlelela i-OnePlus Bullet Wireless ecaleni kwe-OnePlus 6
I-Honor 10 iya kuboniswa ngoMeyi 15
I-Honor 10 iya kutyhilwa ngokusesikweni nge-15 kaMeyi. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo yesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina oluza kuthengiswa kungekudala.
I-OnePlus 6 iya kuvumela ukufihla inotshi njengakwiHuawei P20
I-OnePlus 6 iya kuvumela nokufihla inotshi yesikrini. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokuvumela abasebenzisi ukuba bafihle inotshi yesikrini.
Ukucoca unikezelo lokuqala lwe-HTC U12
Kuvuza uyilo olucingelwayo lwe-HTC U12. Fumana ngakumbi malunga negama eliphezulu eliza kuphehlelelwa kwintengiso kule ntwasahlobo kwaye esele siyilelwe yona.
Uhlaziyo kwi-Android Oreo yeGalaxy S7 / S7 Edge, A5 (2017) kunye ne-A3 (2017) malunga nokuhanjiswa
Ngokutsho kwesatifikethi sokuba i-S7, A3 kunye ne-A5 2017 bayifumene, ukukhutshwa kohlaziyo kwi-Android Oreo sele kuzakwenziwa ngokusesikweni.
IXiaomi Mi Mix 2S ithengise e China
IXiaomi Mi Mix 2S iphelelwa yisitokhwe sayo eChina. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo kwintengiso yefowuni yohlobo lwesiTshayina esele ithengisiwe kwiivenkile kwilizwe lakho.
Ukucoca imifanekiso yokuqala yeXiaomi yomdlalo weqonga
Imifanekiso yokuqala yeXiaomi's Black Shark iye yavuza. Fumanisa ngakumbi malunga nomnxeba we-gamer wohlobo lwesiTshayina, onemifanekiso yakhe yokuqala sele iyinyani.
Umphathi we-OnePlus utyhila iinkcukacha ezithile ze-OnePlus 6
I-CEO ye-OnePlus inika ulwazi oluthe kratya malunga ne-OnePlus 6. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni ephezulu eza kuthi kungekudala ifike kwimarike kwaye malunga noko sele sinolwazi ngakumbi.
Iqela le-OnePlus kunye neDisney kwakhona ukumilisela uhlelo olukhethekileyo lomdlalo bhanyabhanya weAvengers
Inkampani yaseAsia i-OnePlus, iphinde yafikelela kwisivumelwano sokumisela ushicilelo olukhethekileyo lweflegi yayo, nangona ngeli xesha kumcimbi wenkulumbuso yefilimu yeMarvel Studios elandelayo iAvengers: Infinity Wars.
Ukucoca idatha yokuqala yeXiaomi Mi Band 3
Idatha yokuqala malunga neXiaomi Mi Band 3 iye yavuza. Fumanisa ngakumbi malunga nesacholo esitsha sophawu lwaseTshayina ekulindeleke ukuba lufike kwintengiso kulo nyaka.
Iqinisekisiwe: i-Galaxy S6 ayizukufumana i-Android Oreo
Kwimeko apho nabani na ebenakho ukuthandabuza malunga nezicwangciso zenkampani yaseKorea yokuhlaziya i-Galaxy S6 kwi-Android Oreo, iSamsung ibiphethe ukuqinisekisa ukuba ayinakwenzeka.
Ukucoca iinkcukacha zokuqala malunga neGPS S9 Mini
Kutyhilwe iinkcukacha zokuqala zeGlass S9 Mini. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Samsung malunga nokucaciswa okuthile esele kubonisiwe
I-Galaxy A6 kunye ne-A6 + zifumana isatifikethi seFCC
I-FCC iqinisekisa i-Samsung Galaxy A6 kunye neGalaxy A6 +. Fumana ngakumbi malunga neefowuni eziphakathi eziphakathi ezivela kumvelisi waseMzantsi Korea esele iqinisekisiwe.
I-Xiao AI: Umncedisi kaXiaomi ngobukrelekrele bokwenyani sele eyinyani
IXiao AI: Umncedisi kaXiaomi sele eyinyani eTshayina. Fumanisa ngakumbi malunga nomncedisi wenyani wohlobo lwaseTshayina olusekwe kubukrelekrele bokufakelwa obusele busungulwe ngokusemthethweni e China.
INokia 5 kunye no-6 baqala ukufumana i-Android Oreo 8.1
Ukuqinisekisa ukuzibophelela kwayo kuhlaziyo olukhawulezileyo lweetheminali zayo, inkampani yakwaNokia isungule uhlaziyo lwe-Oreo 8.1 yeNokia 5 kunye neNokia 6 2017
Zonke iinkcukacha zobuchwephesha zeNokia 9 ziyahluzwa.Sikubonisa zona!
INokia 9 iphinde yavuza kwakhona kunye nazo zonke iimpawu zayo kunye nokubalulwa kobuchwephesha ekubonakala ngathi sinokuyithemba ngamandla kuba iqinisekisa uninzi lweempawu ezihlebiweyo ukusukela oko yaqalwa, umzekelo, ikhamera kathathu ephetheyo kunye I-SoC SD845 inyuka.
I-Android Oreo 8.1 iza kwiRazer Ifowuni ngo-Epreli iqinisekisa ukuba yeqa i-Android 8.0
Kwaye kwakhona siyaqhubeka nokujonga ukuba inguqulelo ye-8.0 ye-Android yinto enzima yokuqhekeza abantu abadala ...
Dibana neLava Z91, iselfowuni esisezantsi esisezantsi efikelela kwintengiso yaseIndiya
I-Lava ngeli xesha izisa kwiLava Z91, isixhobo esisezantsi se-Android esifike eIndiya kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo ndinxanelwe impumelelo kunye nokwamkelwa kwabathengi. Kuza umboniso we-5.7-intshi ye-HD +, i-1.3GHz quad-core Mediatek SoC, 3FB ye-RAM, nokunye.
Ukucaciswa kunye neempawu zeHonor 7A, isiphelo esitsha senkampani
Sinikela kuwe i-Honor 7A kunye nazo zonke iinkcukacha zayo! Esi sixhobo siza sixhotyiswe ngeempawu ezininzi ezisinika uluhlu olusezantsi, nokuba sisiqingatha seenyawo embindini ngenxa yenkqubo yokusebenza esiyisebenzisayo, isikrini esamkelekileyo kakhulu, ibhetri ephakathi, kunye nokunye. Siyakwandisa!
I-Blackview P10000 Pro iyafumaneka ngexabiso elikhethekileyo kolu nyuso
I-Blackview P10000 Pro: Iyafumaneka ngexabiso elikhethekileyo kwiAliexpress. Fumana ngakumbi malunga nokutyikitywa kwefowuni okwangoku ngexabiso elikhethekileyo kwivenkile edumileyo.
Ukucocwa kweenkcukacha zeXiaomi Mi A2
Ukucoca iifayile ezipheleleyo zeXiaomi Mi A2. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina ukuze ube ne-Android One eya kuthi ifike kwintengiso kweli hlobo.
Ukucoca amaxabiso kweenguqulelo ezintathu ze-OnePlus 6
Ukucoca amaxabiso kwiinguqulelo ze-OnePlus 6. Fumanisa amaxabiso eziza kuba nawo iinguqulelo ezahlukeneyo zomnxeba ophakamileyo ovela kumenzi waseTshayina xa ufika kwimarike kungekudala
Uhambisa njani ii -apps kwikhadi le-SD kwi-Galaxy S9 kunye ne-S9 Plus
Uhambisa njani ii -apps kwikhadi le-SD le-Galaxy S9 kunye ne-S9 Plus. Fumanisa amanyathelo ekufuneka siwenzile ukuba sifuna ukuhambisa usetyenziso kwikhadi le-SD leGPS S9 yethu.
Uhlaziyo lwe-Samsung luhlala luboniswa kwaye lubonelela ngenkxaso ye-GIF kwi-Galaxy S8 kunye neNqaku 8
Okwexeshana ngoku, ngakumbi phakathi kwabasebenzisi abasebenzisa iTelegram endaweni yeWhatsApp njengeyona iphambili ...
UXiaomi uzakwazisa i-smartphone ngeHelio P60 kwikota yesibini
UXiaomi usebenza kwifowuni kunye neHelio P60 njengeprosesa. Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zebrendi yaseTshayina eza kuphehlelela ifowuni nge-MediaTek processor ngaphakathi.
Isamsung ihlaziya iGear S2 ngezinto ezintsha
Okumangalisayo kukuba, abafana baseSamsung basandula ukukhupha uhlaziyo olutsha lweGear S2, ukongeza inani elikhulu lemisebenzi kunye notshintsho lwezithambiso.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza weHuawei ifowuni esongelayo eba yithebhulethi
U-Huawei unelungelo elilodwa lomenzi kwifowuni eguquguqukayo etshintsha ibe yithebhulethi. Fumana ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi lophawu lwesiTshayina ngoku olusebenza kolu hlobo lwefowuni ekufuneka ifike kwintengiso kungekudala.
I-Motorola Moto G6 kunye neG6 Dlala ngokuvuza ngokupheleleyo
I-Moto G6 kunye ne-G6 Play: Ukucaciswa, amaxabiso kunye noyilo luvuza. Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezintsha zohlobo eziza kuphehlelelwa kwintengiso kungekudala kodwa esele siyazi uyilo kunye neenkcukacha zazo.
I-Meizu patents inzwa entsha yeminwe yeminwe kuzo zonke iifowuni ezikwisikrini
Ipatent Meizu yenkqubo entsha yokwazisa ngeminwe. Fumanisa ngakumbi malunga nelungelo elilodwa lomenzi elitsha lophawu lwesiTshayina olwazisa indlela entsha yokuqonda iminwe kwifowuni yesikrini.
Ubukrelekrele bokufakelwa kweHuawei P20 buya kuza kwi-Mate 10 kunye neMate 10 Pro
I-Mate 10 kunye ne-Mate 10 Pro iya kuba nobukrelekrele bobuchwephesha beHuawei P20. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni eziphezulu eziza kufumana obu buchule bokufakelwa.
Ukucoca uyilo kunye neenkcazo zeMoto Z3 Play
Ukucoca kunye nokuyila kweMoto Z3 Play. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca ekulindeleke ukuba iphehlelelwe kwintengiso kamva kulo nyaka.
Amandla eLeagoo 5: 7.000 mAh amandla aqinisekisiweyo
Isiphelo esitsha esivela kwifemu yaseAsia iLeagoo siza kuphehlelela i-Power 5 kwiintsuku ezimbalwa, indawo enomdla kunye nomthamo we-7.000 mAh.
I-Huawei Yonwabele i-8 isungulwe e-China kwaye ezi ziimpawu zayo
Dibana neHuawei Nandipha i-8, isixhobo esiza sixhotyiswe ngeempawu ezilungelelaniswe kakuhle noko sikuthembisayo, apho sifumana khona islim 18: ipaneli ye-9, iprosesa yeQualcomm SD430, kunye noyilo olukhazimlisiweyo olubeka etafileni entle , ineselfowuni nenamandla. Sinikela kuwe!
Ibhentshi lokuqala leGalaxy Note 9 lisazisa ngeenkcukacha zalo
Ibhentshi lokuqala leGalaxy Note 9 lisanda kuhluzwa ngeGeekbench, umlinganiso oqinisekisa amanye amarhe okwangoku ukuza kuthi ga ngoku kubuyiselwa iGalaxy Note 8
Umboniso wokuqala we-Wear OS 1: Inguqulelo entsha ye-Wear OS ngoku iyinyani
Imbonakalo ye-Wear OS yokujonga kuqala 1 ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa. Fumanisa ngakumbi malunga nenguqulelo yokuqala yenkqubo yokusebenza ehlaziyiweyo yeewatchwatches zikaGoogle.
Uyilo lokuvuza kwe-LG G7 kwakhona: Inotshi iyaqinisekiswa
Ukuvuza kuyilo lwe-LG G7 eqinisekisa ukuba kuya kubakho inotshi. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo lwe-LG G7 ephinde yavuza kwaye iphinda iqinisekise ukuba isiphelo esiphezulu siza kuba nenotshi.
Umfanekiso wokuqala osemthethweni we-OnePlus 6: Inotshi iqinisekisiwe
I-OnePlus 6 ine-notch: Umfanekiso wokuqala osemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni ephezulu yeshishini laseTshayina eliya kuba notch, into eyoyikwa ngabasebenzisi abaninzi.
Imifanekiso ye-OnePlus 6 evulekileyo ityhila i-3.5mm Jack kunye ne-USB-C
I-OnePlus 6 inokubonwa kumfanekiso ovuzayo kwi-Twitter kwaye ityhila i-3.5mm i-jack audio, isinxibelelanisi se-USB-C nokunye okuninzi.
Fumana i-Nomu S30 mini ngee-81.74 zee-Euro kuphela, i-Smartphone enesatifikethi semikhosi yasemkhosini !!
Ukuba ujonga i-smartphone enganyangekiyo kukothuka, amathontsi kunye namanzi kunye nothuli ngesatifikethi somkhosi, i-Nomu S30 mini ngee-81.74 zee-Euro kuphela sisiphelo osikhangelayo ngexabiso elingenakubethwa.
Dibana neHuawei Y7 Prime (2018), ilungu elitsha lenkampani esezantsi kwinqanaba eliphakathi
Sinikela kuwe i-Huawei Y7 Prime (2018), i-terminal eza kulayishwa iinkcukacha kunye neempawu ezifanelekileyo, kodwa, kwangaxeshanye, i-smartphone yezoqoqosho ethi, ngaphandle kwengxoxo, izakuthatha indawo enkulu yentengiso emhlabeni kolu luhlu. Sandisa iindaba kuwe!
I-Samsung Galaxy Note 9 inokuthwala ibhetri ephantse ibe yi-4000mAh
I-Galaxy Note 9 iya kuba nebhetri ye-3.850 mAh. Fumanisa ngakumbi malunga nomthamo webhetri yefowuni ephezulu yesithsaba esiza kuthi sifike kwiivenkile kwisiqingatha sesibini sonyaka.
I-OnePlus 5T iyeka ukuthengiswa eUnited States
I-OnePlus 5T iphelile kwisitokhwe eUnited States. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esiphakamileyo ongasenakuthenga elizweni kwaye oko kuthetha ukuba i-OnePlus 6 isondele kakhulu.
Fumana i-Sil ye-ILA ngesaphulelo se- $ 20 ngeAliexpress!
I-Silika ye-iLA iya kuba kwintengiso yeedola ezingama-20 ngeAliexpress kwiiyure ezimbalwa, into engenakuphikiswa eyenza ibeke ixabiso eliphantsi kunelo sele likho. Esi sixhobo siza sixhotyiswe ngescreen se-In-Cell enkulu ye-5.7-intshi, iprosesa ye-SD430, i-4GB ye-RAM, kunye ne-64GB yememori yangaphakathi. Siyakwazisa!
Ixabiso leMoto G6 kunye nama-specs amva nje
I-VLEAKS isizisa umfanekiso-skrini weMoto G6 kwiAmazon -khasi apho le mobile yahlelwa khona njengendawo evuzayo ixesha elifutshane kakhulu ngaphambi kokuba isuswe- ebonisa ezinye izinto ezininzi zeselfowuni apho uninzi lwazo luqinisekisiweyo esele sinalo bendisazisa. Siyakubonisa!
Isikhangeli seMicrosoft Edge ngoku siyafumaneka kwiitafile ze-Android
Isikhangeli sikaMicrosoft, iEdge, sifikile nje kumacwecwe e-Android, nangona sikwinqanaba lokuphuhliswa kwangoko kwaye ayizizo zonke iindlela esiza kusinikwa kuhlobo lwazo lokugqibela ezibonisiweyo.
I-Huawei P20 Lite: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga neprimiyamu entsha yaphakathi ye-brand yohlobo lwaseTshayina esele inikezelwe ngokusemthethweni kulo msitho.
IHuawei P20 kunye neP20 Pro: Isiphelo esiphakamileyo sikaHuawei silapha
IHuawei P20, iP20 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezintsha zokugqibela zorhwebo lwaseTshayina esele zinikezelwe ngokusemthethweni.
Kude kube ngu-Epreli asizukuyibona iMotorola entsha ka-2018
Inkampani yaseAsia iMotorola iza kuzisa uluhlu lwayo olutsha lweemveliso zika-2018, ngo-Epreli olandelayo, apho iMoto G Series iya kuba yeyona nto itsala umdla kuyo.
Nalu unxibelelwano olungqalileyo kusasazo ukubona umboniso weHuawei uhlala eParis, intetho apho siza kwazi iimodeli ezintsha zoluhlu lwe-P yohlobo oludumileyo lwaseTshayina. Ke siyayibona bukhoma ingxelo entsha yeHuawei P20, iP20 Pro kunye neP20 Lite.
I-Xiaomi Mi Mix 2S: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina olusandula ukwenziwa ngokusemthethweni e-China.
IHuawei yeyona nto ithengiswa kakhulu eSpain ngo-2018. Fumanisa okungakumbi malunga nentengiso yolu hlobo kwintengiso yesizwe kunye nesabelo salo ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka.
Oppo F7, ifowuni entsha yohlobo lwe-iPhone X
I-Oppo isizisela i-F7, i-smartphone eneempawu kunye neenkcukacha ezichanekileyo eziphakathi / eziphakamileyo ezineempawu ezijolise kwicandelo elinemfuno ngaphandle kokuzabalazela eyona ilungileyo, kodwa ngesithembiso sokufezekisa oko kuthembisayo. Sinikela kuwe!
I-Unboxing Xiaomi Mi Qaphela i-3 (kunye nokuQala kokuQala)
Apha ndikushiya nge-Unboxing yeXiaomi Mi Qaphela i-3, i-unboxing kunye nokuqala kokubonakala kwesiphelo sendlela endilukhetho olukhulu lokuthenga ukuba ufuna isiphelo esiphezulu kwixabiso eliphakathi.
I-Sharp Aquos S3: Iflegi entsha yohlobo
I-Sharp Aquos S3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca ethiwe thaca kule mihla eTaiwan kwaye kungekudala izakuba semarikeni.
IXiaomi Mi Mix 2S ayizukubiza nge-CEO yeXiaomi
Umphathi omkhulu weXiaomi uthi iXiaomi Mi Mix 2S ayizukubiza. Fumanisa ngakumbi ngesi siqinisekiso kwi-CEO yenkampani malunga nefowuni yohlobo lwesiTshayina.
Ukucoca kuqala imigaqo ye-HTC U12 +
Ukucaciswa kokuqala kwe-HTC U12 + kuvuza. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esitsha esitsha sefemu eneenkcukacha esele zivuziwe.
I-LG isungula uhlelo olukhethekileyo lwe-V30 Plus ephefumlelwe yimanga kaJoJo's Bizarre Adventure
Ngomhla wamashumi amabini anesithathu ku-Matshi inkampani yaseKorea i-LG, iya kuthengisa uhlelo olukhethekileyo lwe-LG V23 Plus, eneenkcukacha zothotho lwamanga iJoJo's Bizarre Adventure
Isamsung iyayiqonda ingxaki yemimandla efileyo yesikrini seGPS S9 kwaye sele isebenza kwisisombululo
Inkampani yaseKorea i-Samsung ibonile ukuba ubukho beengxaki zemimandla efileyo kwiscreen se-S9s ziyinyani kwaye sele iqalile ukuyiphanda.
I-HTC U12 + iya kuba sisiphelo esiphezulu se-HTC kuphela kwi-2018
I-HTC iya kumilisela kuphela i-HTC U12 + kwisiphelo esiphakamileyo kulo nyaka. Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zenkampani ze-2018 ezibandakanya ukumilisela kuphela ifowuni ephezulu.
Isamsung iveza i-Galaxy J7 Prime 2: Yazi iinkcukacha zayo
I-Galaxy J7 Prime 2: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwaseKorea esele inikezelwe ngokusemthethweni eIndiya
Nokuba yi-Samsung okanye i-Apple: i-smartphone yokuqala ene-512 GB iya kwenziwa yiHuawei
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba iya kuba nguHuawei, umenzi wokuqala, kwakhona, ukumilisela i-terminal ene-512 GB yokugcina kwintengiso.
Ukucoca iinkcukacha ezipheleleyo ze-OnePlus 6
Ukuvuza iinkcukacha ze-OnePlus 6. Fumanisa ngakumbi malunga nokuchazwa kwefowuni entsha ephezulu yeshishini laseTshayina esele livuziwe,
UGoogle uqinisekisa ukuba iNexus Player ayizukufumana i-Android P
UGoogle uqinisekisile ukuba iNexus Player, ayizukuhlaziya ku-Android P kuphela, kodwa iya kuyeka nokufumana uhlaziyo lokhuseleko.
Isifundo sevidiyo esisebenzayo apho ndikubonisa khona ukuba usifaka njani isicelo esisemthethweni seWhatsApp kwithebhulethi ye-Android. Konke oku ngaphandle kwesidingo sokubhenela kwiWebhu yeWhatsApp okanye nayiphi na inkohliso okanye imodyuli.
I-Nubia V18: Uluhlu olutsha lwephakathi kunye nebhetri enkulu
I-Nubia V18: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ekumgangatho ophakathi wokuphehlelelwa kwefowuni kamva kule nyanga e-China.
I-Galaxy S9 kunye ne-S9 + ziya kuba nenkxaso kwinyani ye-ARCore eyongeziweyo
I-Galaxy S9 kunye ne-S9 + ziya kuxhasa inyani ye-ARCore eyongeziweyo. Fumanisa ngakumbi ngesibhengezo esisemthethweni sokuba inyani eqinisekisiweyo kaGoogle iza kwisiphelo esiphakamileyo seSamsung.
Ezinye iiyunithi zeGPS S9 kunye ne-S9 + zibonisa iingxaki kwezinye iindawo zesikrini
Ezinye iiyunithi zeGPS S9 kunye ne-S9 +, zibonelela ngengxaki yokusebenza kwescreen, ukubonelela ngemimandla efileyo apho unxibelelwano lungasebenzi.
I-Sharp Aquos S3 Mini: Uluhlu oluphakathi luyaqhubeka ukubheja kwinotshi
Fumanisa okungakumbi malunga ne-Sharp Aquos S3 Mini, ifowuni entsha yoluhlu oluphakathi olukwivenkile ese China. Ukucaciswa kwayo, amaxabiso kunye nomhla wokuqaliswa sele kwaziwa.
IXiaomi iya kuhlaziya ngaphezulu kweefowuni ezingama-30 kwi-MIUI 9.5
Ngaphezulu kweefowuni ezingama-30 zeXiaomi ziya kuhlaziya kwi-MIUI 9.5. Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni zohlobo lwaseTshayina eziza kuphucula le nguqulo yokwahlulahlula kwiiveki ezizayo.
Lo inokuba ngumfanekiso wokuqala we-ZTE Nubia Z19
Imifanekiso emitsha evuzayo ityhila isixhobo esingaziwayo seZTE Ngaba inokuba yinto elandelayo yeZTE Nubia Z19?
Sinikela kuwe iMeizu E3, iselfowuni yaphakathi kwinqanaba eliphakathi lenkampani
Dibana neMeizu E3, iselfowuni eza neempawu ezijolise kwicandelo leemfuno eziphakathi apho iscreen se-6-intshi, i-SoC enamandla asibhozo, kunye nenkumbulo enesisa ye-RAM zezona zinto zilindileyo. Siyakwandisa!
I-Blackview P10000 Pro: 18: 9 isikrini kunye nebhetri ye-11.000 mAh
I-Blackview P10000 Pro: Ukucaciswa kokuqala kuqinisekisiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluya kuthi lwenziwe ngokusemthethweni kwiintsuku ezimbalwa.
IHuawei Nova 3e: Uluhlu oluphakathi lwebrand entsha
IHuawei Nova 3e: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumana ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi lwenqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina esele inikezelwe ngokusemthethweni kwilizwe lakho.
I-HTC Desire 12 kunye ne-Desire 12+: Ukucaciswa, amaxabiso, kunye nokuSungulwa. Fumana ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi lwenqanaba elitsha lophawu lwaseTaiwan esele ityhilwe ngokusemthethweni
Sinikela kuwe i-Lenovo K5 kunye ne-K5 Plus, ii-terminals ezimbini ezijoyine ukhuphiswano oluphakathi kwinqanaba kulo nyaka kunye neenkcukacha ezibalaseleyo kunye neempawu zesisa ngokubhekisele kumaxabiso abo. Bazi ngakumbi!
I-BQ isika abasebenzi bayo bokulungisa kwisiqingatha kwi-ERE enye
I-BQ inciphisa abasebenzi bayo bokulungisa nge-ERE. Fumana ngakumbi malunga nezizathu zokuba kutheni inkampani yaseSpain inyanzelisiwe ukunciphisa abasebenzi bayo.
I-Lenovo S5: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokuqaliswa kuqinisekisiwe. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ekumgangatho ophakathi kwifemu yaseTshayina esele inikezelwe ngokusemthethweni.
Iindleko zokuvelisa i-Galaxy S9 + ziyafana kakhulu nezo ze-iPhone X
Iindleko zokuvelisa i-Galaxy S9 + ngama-10 euros ngexabiso eliphantsi kunaleyo ye-iPhone X kunye nee-euro ezingama-10 ezibiza kakhulu kuneGalaxy Note 9, ngaphandle komahluko wokugqibela wamaxabiso.
I-OPPO R15: Iflegi entsha kraca
I-OPPO R15: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa kuqinisekisiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina oluya kuphehlelelwa ngo-Epreli.
Isamsung iyakususa umhleli wevidiyo yayo ngokusungulwa kwe-Android P
Inguqulelo elandelayo ye-Android, Android P, iya kukhokelela ekususweni kwesicelo seSamsung, uMenzi weMovie
I-OUKITEL WP5000: Ukucaciswa ngokupheleleyo kweFowuni eNtsha engenaManzi
I-OUKITEL WP5000: Iinkcukacha ezisemthethweni ziqinisekisiwe. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha evela kuhlobo lwesiTshayina olume ngokuchasana namanzi. Iza kuphehlelelwa kwintengiso kungekudala.
Imifanekiso emitsha ehluziweyo yeXiaomi Mi Mix 2S
Ityhile uyilo lweXiaomi Mi Mix 2S kwimifanekiso emitsha. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha ephezulu yeshishini laseTshayina eliza kuphehlelelwa kungekudala kwaye esele sazi uyilo lwayo lokwenyani.
ILA Silk, iselfowuni engabizi kakhulu eneenkcukacha zepremiyamu
Dibana ne-iLA Silk, iselfowuni engena kwipremiyamu ngenxa yoyilo kunye nokugqitywa kwe-aluminium emqolo ngasemva, kunye nemiphetho esecaleni exhasa isikrini sayo se-intshi ye-5.7. Le fowuni iza ne-SD430 SoC, 4GB ye-RAM, kunye ne-64GB yememori yangaphakathi.
IXiaomi Mi 6 ijoyina iProble Treble
IXiaomi Mi 6 sele inenkxaso yeProjekthi iTrble. Fumanisa ngakumbi malunga nendlela ifowuni yophawu lwaseTshayina efumene inkxaso ngayo kule projekthi kaGoogle.
I-MIUI 9 ihlaziywa ngeempendulo ezikhawulezayo kunye nezaziso eziqokelelweyo
Iimpendulo ezikhawulezileyo kunye nezaziso zamaqela ziza kwi-MIUI 9. Fumana okuninzi malunga nohlobo olutsha lokwahlulahlula iifowuni zeXiaomi eziqala ukufika kwiimodeli ezithile.
Ukucaciswa kokuqala kweGlass J7 2018 kutyhilwe
Kutyhilwe iinkcukacha zokuqala zeGlass J7 2018. Fumana ngakumbi malunga nefowuni entsha ye-Samsung eya kuthi ifike kwintengiso kwezi veki zimbalwa zizayo.
Ukucoca amaxabiso eHuawei P20 kunye neHuawei P20 Pro
Amaxabiso e-Huawei P20 kunye ne-Huawei P20 Pro atyhilelwe.Fumana okuninzi ngamaxabiso athe avuza iifowuni eziphezulu zohlobo lwaseTshayina.
I-Android Auto ivula ngokuzenzekelayo i-smartphone yethu xa ixhunyiwe
Uhlaziyo lwamva nje lwe-Android Auto, uguqulelo 2.9, lusinika njengeyona nto intsha inokwenzeka yokuvula isiphelo sendlela yethu nje ukuba siyidibanise nesithuthi sethu.
Ukuhlawulwa kukaGoogle nge-OS ye-Wear kufika eSpain ngokusemthethweni
I-Google Pay iza kwimilindo nge-Wear OS eSpain. Fumanisa ngakumbi malunga nokumiliselwa kwesicelo sentlawulo esifikelela nakwiwotshi kunye nenkqubo yokusebenza kukaGoogle.
Iminqweno malunga neXiaomi ekusenokwenzeka ukuba ubungayazi
Iinqwenela ze-4 malunga neXiaomi ngokuqinisekileyo ubungazi. Fumanisa ezi curiosities malunga nophawu lwesiTshayina oludumileyo phantse ngokuqinisekileyo olwalungavakali ngathi luyinto kuwe.
IHuawei ithelekisa ikhamera yeP20 neDSLR kwintengiso zentengiso zakwangoko
Inkampani yaseAsia iHuawei iqale ukwenza imilomo ngezaziso ezibini ezitsha apho i-P20 ithelekiswa nekhamera yemveli yeDSLR.
IBlackshark, ifowuni efanelekileyo yeXiaomi yabadlala umdlalo, ivuza iGeekbench
IXiaomi Blackshark, isiphelo sendlela eyilelwe iigmers, eziza zixhotyiswe ngeQualcomm SD845 SoC kunye ne-8GB yememori ye-RAM, ihluziwe eGeekbench, umlinganiso onandipha igama elihle kunye nengxelo yomkhondo esinokuyithemba ubukhulu becala akazange asishiye kakubi. Sikuxelela iinkcukacha!
Zonke ezi zii-Android Wear smartwatches eziza kuhlaziywa kwi-Android Wear
Utshintsho olusuka kwi-Android Wear ukuya kwi-Android Wear nguGoogle ngoku lusemthethweni. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokuba i-smartwatch yakho iya kuhlaziywa, emva koko sikubonisa zonke iimodeli ezifanelekileyo.
I-Wear OS: Ukubuyiselwa kwakhona kwe-Android Wear kusemthethweni
I-Wear OS: Inguqulelo entsha ye-Android Wear ngoku isemthethweni. Fumana ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza yeewotshi ezifanelekileyo ezisemthethweni ngoku kwaye ziya kufumaneka kungekudala.
Ukuhlaziywa kweHuawei P10 kunye no-P10 Plus kwi-Android 8.0 Oreo
I-Android 8.0 Oreo ifika ngokusemthethweni kwi-Huawei P10 kunye ne-P10 Plus. Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluza kwiifowuni ezimbini zokugqibela zohlobo lwesiTshayina.
I-Galaxy A6 kunye neGalaxy A6 + ibonakala kwiGeekbench
Sikubonisa iibhentshi zokuqala ezikhutshiweyo kwiphepha leGeekbench lokuba i-Galaxy A6 kunye neGalaxy A6 + zinokuba yintoni
IHuawei P20 Lite sele ithengiswa e-Italiya nge-369.90 euros kwaye ezi zizinto ezichaziweyo
IHuawei P20 Lite sele ikhona iyathengiswa e-Itali ngexabiso elingelolixabiso lama-369 euros, kwaye ikwathengiswa ePoland malunga nee-euro ezingama-380 kutshintshiselwano. Esi siginali siza sixhotyiswe ngentla kwezi sele zikhankanyiwe, njenge-notch. Fumanisa!
Inguqulelo ye256 GB yeGalaxy S9 kunye ne-S9 + iza kufika eSpain ngo-Epreli 1
Inkampani yaseKorea i-Samsung iqinisekisile ukuba iyakusungula imodeli yokugcina eyi-256 GB ye-Galaxy S9 kunye neGPS S9 + eSpain ngo-Epreli.
Ukucaciswa ngokupheleleyo kweVivo V9 kubonakala kwindawo esemthethweni ngaphambi kokumiliselwa kwayo
IVivo V9 ikhutshiwe kunye nayo yonke idatha yayo kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani. Phakathi kweempawu esinokuthi sigqamise ezona zininzi zolu luhlu luphakathi, sifumana iprosesa yeQualcomm SD626, isikrini esikhulu se-intshi ezi-6.3, kunye nezinye izinto. Fumanisa!